Pogba 'markasta waxa uu u Ciyaari doonaa Man Utd' -
HomeciyaarahaPogba ‘markasta waxa uu u Ciyaari doonaa Man Utd’
Pogba ‘markasta waxa uu u Ciyaari doonaa Man Utd’
December 13, 2020 M.Jo ciyaaraha, Wararka 0
Paul Pogba ayaa sheegaya “in wax walba ay caadi u yihiin” isaga iyo Manchester United, waxa uuna ku adkaysanayaa in “100% uu ka qeybqaadanayo howsha kooxda”.
Bla bla [in la iska hadlo] wax muhiimad ah oo ay leedahay malahan. Mustaqbalku waa uu fog yahay, muhiimmadu waa maanta anigana 100% waxaan ka qeybqaadanayaa howsha kooxda! Marwalba waxaynu awood ku leennahay inaynu wadajirno.. wax walba waa ay inoo kala caddaayeen aniga iyo kooxdaba, taasna weligeed isma badalayso.
“Marka aadan waxba ka ogayn waxa gudaha ka soconaya waxaa wanaagsan inaadan hadlin.